Fivondronamben'ny Federasiona Ranomasimbe Indiana - ss 3t l0512 lak
Mba tsy hahavaky tratra (1Tes2:9-12)
alakamisy 2 Aog.
Rehefa tao Tesalônika i Paoly, dia inona ihany koa ireo zavatra hafa nataony ankoatra ny fitoriana ny filazantsara, ary inona no antony? Jereo ny 1 Tes.2:9,10.
Raha raisina ara-bakiteny ny niasan’i Paoly “andro aman’alina”, dia ho filazana mihoapampana ihany izany. Fomba fanehoan-kevitry ny Grika ny manombana mihoatra ilay tena fotoana lany mba hilazana ny habetsahany. Ny tian’i Paoly holazaina àry dia ny niasany ankoatra ny ora tokony hanaovany izany mba tsy ho vesatra ho azy ireo. Tsy tian’i Paoly hisy sakantsakana ny fijoroany ho vavolombelona tamin’izy ireo. Ankoatra izany, nitandrina fatratra izy mba tsy hanafintohina an’Andriamanitra sy ny olona (jereo ny 1 Tes. 2:10, Lio. 2:52). Nanao izay tsy “hananany tsiny” teo amin’ny fifandraisany rehetra i Paoly sy ny apôstôly mba tsy hifantoka afa-tsy amin’ny filazantsara ny olona.
Inona no fampitahana nampiasain’i Paoly ao amin’ny 1 Tes. 2:11,12 ho fanehoany ny fomba fitondrany ny Tesalônianina? Jereo koa ny Lio. 11:11-13. Inona no ampianarin’izany fampitahana izany?
Ny ray tsara dia mametraka fefy ary manome fampaherezana sy fitiavana. Ataony mifanaraka amin’ny toetra sy ny toe-pon’ny zanany tsirairay avy ny fikarakarany sy ny fanabeazany. Arakaraka ilay zaza sy izay toe-javatra miseho eo no hanoloran’izany ray izany fampaherezana na fananarana mahery vaika na koa famaizana hanitsy ny fitondrantenany.
Somary misy fihenjanana ihany teo amin’ny asa misiônera nataon’i Paoly. Amin’ny lafiny anankiray, dia nataony mandrakariva izay hampifanarahany ny fomba fiasany amin’ny toetra tokana ananan’ny antokon’olona iasany sy ny toe-javatra misy azy ireo. Amin’ny ankilany anefa, dia nahasarotiny azy fatratra ny fahatokian’ny hafatra nentiny sy ny fifanarahan’izany amin’ny fitondran-tenany ety ivelany sy ao anatiny. Amin’ny fomba ahoana no hahatonga ny olona iray ho tahaka izany kanefa koa “tonga zavatra rehetra ho an’ny olona rehetra”?
Ny tsiambaratelon’izany dia ny fitiavan’i Paoly ny olona nitoriany ny filazantsara. Nanao izay ho afany izy mba hanehoana ny ohatry ny fahatokiana tamin’izy ireo. Tsapany anefa fa nisy zavatra tsy mbola zakan’izy ireo ny mandray azy (jereo koa ny Jao. 16:12). Nampiasainy àry ny tanany sy ny fahalalana azony, mba tsy hisian’ny sakantsakana eo amin’ny faneken’ny olona ny filazantsara. Azo antoka fa lesona lehibe dia lehibe momba ny fahafoizan-tena izany.